Factorylọ ọrụ China Elbow na-akwado ụlọ ọrụ na ndị na-eweta ya | qiangjing
Mkpoko aka agbaka, dika ihe egwuregwu eji ama oru, na-egosi udiri ihe nchedo eji eme ihe iji kpuchido nkwonkwo aka. Site na mmepe nke ọha, pads elbow abụrụla otu n'ime ngwaọrụ egwuregwu dị mkpa maka ndị na-eme egwuregwu.
Ọrụ: Chebe ikiaka, nye ezigbo mkpakọ
Mkpoko aka agbaka, dika ihe egwuregwu eji ama oru, na-egosi udiri ihe nchedo eji eme ihe iji kpuchido nkwonkwo aka. Site na mmepe nke ọha, pads elbow abụrụla otu n'ime ngwaọrụ egwuregwu dị mkpa maka ndị na-eme egwuregwu. Ihu aka bụ otu n'ime akụkụ siri ike n'ahụ mmadụ. Ohere nke onye na-eme ihe ga-egbu egbu n’egwuregwu dị obere, mana ndị na-eme egwuregwu na-ejikarị apị ụkwụ aka iji gbochie mmerụ ahụ.
Ọrụ mbụ nke oghere aka ekpe bụ iji nye nrụgide ma belata ọzịza; nke abụọ bụ igbochi ọrụ na ikwe ka akụkụ merụrụ ahụ gbakee. N'otu oge ahụ, ọ kachasị mma ịghara igbochi ọrụ aka nkịtị, yabụ ọ bụrụ na ọdịghị mkpa, aka adịghị emetụ aka n'apata ụkwụ. Ezubere n'ikpere aka na ikpere iji chebe ikpere na ikpere site na mmerụ ahụ ma yiri akwa dị larịị ma ọ bụ shells siri ike. Iji belata ịdị arọ nke akụrụngwa, ndị na-ese ihe haziri ọba ụkwụ na ikpere iji dị mfe, mara mma karị, adaba ma baa uru.
Enyi ndị masịrị igwu egwu tenis, badminton, tebụl tebụl, mgbe ha gbachara bọl, ọkachasị mgbe ị na-egwu azụ, ikpere aka ga-afụ ụfụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na itinye aka n'ikiri aka ga-afụ ụfụ, ndị ọkachamara na-agwa anyị na nke a na-akpọkarị "tenis agbatị. ikpere aka bụ ọkachasị n’oge a na-akụ bọọlụ, nkwonkwo aka aka aka adịghị, agbachighị aka aka ya, ọ na - agbatịkwa akwara aka aka nke ukwuu, na - emebi mbibi mgbakwunye ahụ. Yabụ mgbe ị na-akpọ tenis, ọ bụrụ na enwee ihe mgbu na mpaghara, ọ ga-akacha mma ka ị pịa nkwado aka mgbe ị na-etinye ogwe aka ekpe. Ọ bụrụ na ịgbacha oke dị oke mma, ọ gaghị echebe gị .. Ejikwala ya aka ike ma ọ bụ nke ga-akwa nke ukwuu, ga -eme ka ọgbụgba ọbara daa, ọ ga -eme ka ọ ghara ichebe.
Njirimara nke nkwado aka:
1 Ọgwụ ọgwụgwọ: ọgwụgwọ ọkụ na iru mmiri bụ ihe gbadoro ụkwụ n'ọtụtụ ndị nkuzi na ndị dọkịta na-agbazigharị ịgwọ nkwonkwo na akwara ndị merụrụ ahụ. A na-eji akwa dị elu akpa aka mee akwa aka, nke nwere ike ịbanye n'akụkụ ebe a na - ahụ iji gbochie oke ahụ ọkụ, belata ihe mgbu na mpaghara emetụtara, ma meekwa ka ọ gbakee ngwa ngwa.
2 Kwalite mgbasa ọbara: Oku a na - enweta ọgwụgwọ site na mpe mpe aka agbatị na - akwalite mgbasa ọbara nke akwara anụ ahụ na ebe ejiri. Mmetụta a bara ezigbo uru maka ọgwụgwọ nke ọrịa ogbu na nkwonkwo na mgbu nkwonkwo. Na mgbakwunye, ịmịnye ọbara nke ọma nwere ike rụọ ọrụ ọfụma nke akwara ma belata ihe mmerụ ahụ.
3 Mmetụta nkwado na nkwụsi ike: pads el el nwere ike ime ka nkwonkwo na akwara dị ike iji guzogide mmetụta nke ike mpụga. Chebe nkwonkwo na akwara.
4 Ihe dị arọ, ihe na-enye ume ndụ, dị mma iyi, yana nkwado dị mma na nshịkọ, igwe ịsa ahụ, dị mfe iyi, dị mma maka ịgba ọsọ, egwuregwu bọl na egwuregwu n'èzí.
Isiokwu edemede nke Elbow Kwadoro
Legharịa anya n’obodo basketball iji chọta ihe bara uru na ndụ gị kwa ụbọchị
Na NBA nke narị afọ gara aga, pads elbow abụrụla otu n'ime ihe nchebe kachasị amasị ọtụtụ kpakpando. Uzo eji eweta ogwe aka ukwu n’akuku Jọdan. Ndọ aka Elbow abụghị naanị na ọ na - eme ka ihe na - eme ihe ike, kamakwa ọ na - arụ ọrụ ụfọdụ - mmetụta antiperspirant. Ọtụtụ swingman a ma ama na-esote Jordan, dị ka Penny Hardaway na Grant Hill ejiriwo akwa aka ekpe.
G in i mere o ji emeghariri aka ah ua? Ihe ịrụ ụka adịghị ya na Jọdan bụ vaịn nke afọ ahụ! Na narị afọ nke 21, Jordan ka na-eyi ihe nkwado aka ma ọ bụ naanị ya na-eme ya. Nke a abụrụla ọdịbendị pụrụ iche nye agadi nwoke, ọ bụghị sọsọ NBA. Site na mpe mpe akwa na ogwe aka, nke ghọrọ ihe nchebe kachasị nke pụtara n'ụlọ ikpe n'oge ahụ. Anyị nụrụ na ndị egwuregwu na-eyi akwa aka ekpe, dịka ha soro Jọdan. Oge ahụ ruru na 2003. Jordan lara ezumike nká. N'ụlọ ikpe, anyị enweghịzi ike ịhụ chi nke basketball. N'oge a, ọ dị ka ogwe aka aka agbagookwala na Jọdan, mana bidoro itinye aka na aka (ọ bara uru karị). Kobe, AI, Pierce, Carter na ndị egwuregwu ndị ọzọ tinyekwara aka uwe. Ha wetara ogwe aka na aka na otu aka ọzọ. Ọ bụ ezie na aka ogwe aka dị iche na mpe mpe aka, ọ ka dị mma n'anya. N'oge ugbu a, a na-anaghị ahụkebe apata ụkwụ n'ikpe n'ụlọ ikpe NBA, uwe aka abụrụla otu n'ime ihe eji egbochi nchebe.
N'ezie, enwere ọtụtụ ihe eji emechi aka uwe n'egwuregwu, ọ bụghị naanị n'ihi na ha dị mma.
1. Aka ogwe aka nwere ike ichebe ogwe aka n’ụzọ niile, meziwanye nkwụsi ike nke si na ogwe aka, ma mee ka akwara aka ndị ntorobịa ghara ịdị n ’mmerụ ahụ n’arụ mmega ahụ.
2. Aka ogwe aka nwere ike ijide ogwe aka nke akwara aka. Yiri ogwe aka na-eche nche ga-eme ka e nwee mmetụta nke nrụgide n’elu akpụkpọ ahụ mmadụ, gbochie mkpọtụ akwara, ma mee ka ọbara na-ekesa n’elu akpụkpọ ahụ. Mkpuchi a ga-akwado ike ike ma melite arụmọrụ egwuregwu.
3. Aka uwe nwere ike idowe ogwe aka. Ijikwa ọnọdụ okpomọkụ nwere ike ịgba mbọ hụ na ike nke ogwe aka anaghị adị mfe furu efu. Onye na-eche ogwe aka nwekwara ike ịmị ọkụ mgbe ọ na-apụ n'oge oyi.
4. Yiri aka uwe iji gbochie nrịcha akpụkpọ, ikpu na ọnya. Ọ bụrụ na ọ bụ ogwe aka nche nke nwere ihe mgbochi ọgụ na ikiaka, ọ nwekwara ike igbochi nchiba na ọdida.
5. Aka ogwe aka nwekwara ọrụ nchebe anyanwụ. Egwuregwu n’èzí n’okpuru anwụ na-achasi ike n’oge ọkọchị nwere ike belata ndepụta mbibi akpụkpọ nke ultraviolet ụzarị.
Nke gara aga: Nkwonkwo ukwu
Osote: Egwuregwu egwuregwu
Nkwado sillonon naịlọn
Ihe nkwado naịlọn
Yiri eriri akwa na akwa akpa
Uwe aka naịlọn